नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत आज र भोली राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ खुवाइँदै छ । देशभरका ५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम रहेको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ । भिटामिन ‘ए’ सँगै जुकाको औषधि र पोषण तत्त्वले बनेको बालभिटा खुवाउने कार्यक्रमका साथै बालबालिकाको पाखुराको नापसमेत आज र भोलि लिइने छ ।
हेटौंडामा अत्याधुनिक ल्याब संचालनमा
मकवानपुरगढीमा १५ शैयाको अस्पतालको शिलान्यास
के हो युरिक एसिड ? बच्ने उपाय केके हो ?
कैलाश गाउँपालिकामा १० शैयाको अस्पताल
राक्सिराङमा ७० नाघेकालाई घरैमा स्वास्थ्य सेवा
बालबालिकामा अनिद्राको समस्या किन हुन्छ ?
कोभिड सङ्क्रमित अब १० दिन मात्र क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने
महिनावारी गडबढी हुने कारणहरू केके हुन् ?
शरीरमा भिटामिन बी कमी हुँदा कस्तो लक्षण देखिन्छ ?
बालबालिकालाई कुन समयमा घाममा राख्ने ?
निमोनिया के हो ? संक्रमणबाट कसरी जोगिने ?